Farmada: fampanaraham-penitra ny fampiofanana ara-pambolena | NewsMada
Farmada: fampanaraham-penitra ny fampiofanana ara-pambolena
Tanjon’ny tambajotra Farmada ny hisian’ny fiofanana mikasika ny fambolena sy ny fiompiana manaraka ny fenitra isaky ny rojom-pihariana avy. Miainga any amin’ny famokarana, ny fanodinam-bokatra, ny fiatrehana ny tsena.
Natao omaly, teto Antananarivo, ny atrikasa fankatoavana ny voarakitry ny bokin’andraikitra mikasika ny fiofanana ao anatin’ny lalam-pihariana fambolena sy fiompiana. Nikarakara azy ny tambajotra Fiofanana ara-pambolena ambanivohitra eto Madagasikara (Farmada), miara-miombon’antoka amin’ny Fandaharanasa Formaprod. Nambaran’ny filoha nasionaly ny Farmada, i Merison Serge, fa tafiditra ao anatin’ity fankatoavana ity ny mikasika ny kalitaon’ny fiofanana sy ny hametrahana ny marika manokana hamantarana ny fiofanana (label). Natao izany satria mifangaro hatramin’izay ny fiofanana natao, mifangaro ny singa samihafa ao anatiny ho an’ny mpiofana sy ny mpampiofana ary ny toeram-piofanana.
Anisan’ny voarakitra amin’ity raki-kevitra ity ny mikasika ny fahazoan-dalana omen’ny fanjakana (accreditation) ny toeram-piofanana. Faharoa, ny fampanaraham-penitra ny fiofanana (agreement), ijerena ny lafiny fotodrafitrasa ao amin’ny toeram-piofanana, ny fitaovana ampiasaina, sns. Fahatelo, ny fankatoavan’ny fanjakana mamoaka ny mari-pahaizana sy ny diplaoma (homologation), satria maro tokoa ireo sandoka, na koa tsy manan-kery amin’ny fanjakana akory izy ireny.
Voakasik’izany avokoa ny ao anatin’ny rojom-pihariana rehetra, toy ny famokarana, ny fanodinam-bokatra, ny lafiny teknika sy ny kojakoja na ny fikarakarana, ny lafiny tsena, sns.
Tanjona ny hametrahana fiofanana tena voafehy (spécialisation) isaky ny rojom-pihariana.
Miisa 107 ny foibe fiofanana tohanan’ny Farmada miparitaka any amin’ny faritra 13 eto amin’ny Nosy. Nanomboka ny aogositra 2020 teo ny fanangonana ny raki-kevitra avy any ary ity naravona nankatoavina eto Antananarivo ity. Nilaza ny filohany, i Merison Serge, fa ezahina hivoaka amin’ny 20 desambra ho avy izao. Haroso eny amin’ny governemanta, mialoha ny hankatoavana azy ka hampiharina eto amin’ny firenena, manomboka amin’ny taona 2020.